Rikoooo.com - Ilay IL-76 vaovao
Joined: 15 Aogositra 2017, 02:48
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by AJT67 » 15 Aogositra 2017, 03:07
Manontany tena aho raha nisy olona nisedra olana tao amin'ny IL-76 vaovao?
Voalohany aloha, betsaka ny fisaorana, dia fifandimbiasana mahavariana amin'ny fiaramanidina lehibe iray izay niandrasako nandritra ny taona maro, na izany aza dia manana olana roa aho, ny iray tsy ampy taona ary ny iray hafa tsy dia miteny afa-tsy ny kely indrindra.
1. Efa nanandrana namantatra ny rafitra fanaraha-maso ny SHIFT + 4 aho. Misy manana fanitsiana ve ho an'ny Saitek X-52?
2. Rehefa mamarana ny sidiko aho dia mihakely FSX Ho any amin'ny farany ambany ankavanan'ny efitranoko. Tsy azoko atao ny manetsika an'io varavarankely io, ary tsy maintsy mamarana ny FSX ny asako manakatona ny sim.
Efa tara ny simiko ary tsy misy zavatra napetraka tsy dia mahazatra, ka azoko antoka fa mety ho olana amin'ny hafa izany.
Raha misy manana hevitra momba ny fomba amboarina ireo entana ireo dia azafady azafady mba hamaliana ahy ianao.